Funga Laser akangwara kugadzira
Zvakadzama indasitiri kusanduka inogadzirwa zvinogadzirisa pamwe Laser michina
Golden Laser - World-mukurumbira muchiso kuti Laser michina mugadziri.
makore 18 akaramba kutanga mubasa Laser indasitiri.
Yakagozha customization kugona wako chaiyo kushanda indasitiri.
Wuhan Golden Laser Co., Ltd. hwakagadzwa muna 2005 uye dzakanyorwa pamusoro Growth Enterprise Market of Shenzhen Stock Exchange muna 2011. Zvinoita digital Laser Michina kushanda mhinduro Provider uye vakazvipira pakupa Laser kubudiswa negadziriso vanoshandisa pose.
Pashure pemakore anopfuura 10 dzamarudzi kukura uye utsanzi, Golden Laser ava China tiite uye nyika-mukurumbira akaigadzira Laser michina. Mumunda mukuru-mugumo digitaalinen Laser midziyo kugadzira, Golden Laser akagadza kwayo kutungamirira zvemichina uye muchiso zvakanaka. Kunyanya mumunda Textiles, zvipfeko uye maindasitiri kusanduka micheka Laser zvikumbiro, Golden Laser razova China kutungamirira muchiso.
Gadzirisa pakupa digitaalinen, zvoga uye vakangwara Laser chikumbiro mhinduro.
- Help zvetsika maindasitiri inogadzirwa gadziriro ndiwedzere kune digitaalinen, kuchinja kuti nzira itsva kukura.
Golden Laser iri specialized ari R & D, kugadzirwa uye kumusika pamwe CO2 Laser nokuveza muchina ,galvanometer Laser muchina uye internet Laser okurwadzisa muchina . The chigadzirwa mutsetse chinofukidza mienzaniso anopfuura 100 akadai Laser nokuveza, Laser achiita zvokutemera, Laser kupenda, Laser perforating, uye Laser zambuko.
Mafomu zvinosanganisira digitaalinen kudhinda, Textiles, zvipfeko, matehwe shangu, machira maindasitiri, kwaakaita, kushambadza, chitaridzi kudhinda uye kavha, zvemagetsi, fenicha, kushongedzwa, simbi kubudiswa uye mamwe maindasitiri mazhinji. A nhamba mishonga uye ruzivo vakawana National patents uye Software Copyrights, uye CE uye FDA kutenderwa.
KUBVIRA pagore 2000
SALES Revenue MUNA 2017
Nokuti kare emakore, Golden Laser vaiteerera kumusika zvinodiwa zvakangwara kugadzirwa. Nokusangana dzomunyika pfuma indasitiri nokubatanidza mashoko michina kuumba akangwara workshop zvakanaka mhinduro. Panguva yekuwana akangwara kugadzira, kunounzawo iwe zvivanakire-zvechokwadi nguva kugadzirwa Data zvisaririra okufunga,-chaicho nguva kuchinja,-chaicho nguva zvichiongororwa, zvishoma nezvishoma kuderedza kupindira kwevanhu apo kuvandudza chigadzirwa yepamusoro uye pakukurukura nguva, munowedzera nyore zvakanaka.
Kutarisira ramangwana, Golden Laser achaita vanoomerera indasitiri budiriro sezvo aitungamirira kukura nzira, vanogara kusimbisa Michina utsanzi, utariri utsanzi kumusika utsanzi sezvo chinoumba utsanzi hurongwa, uye vanonanga kuva mutungamiriri akangwara, zvoga uye digitaalinen Laser chikumbiro zvingaitwa.
MUNYIKA YOSE Marketing Network
In mhiri kwemakungwa pamisika, Golden Laser akagadza akura yokutengesa webasa samambure munyika dzinopfuura 100 uye kumatunhu pose.
- Golden Laser rava kupfuura ekisipota kuti Laser zvigadzirwa mu China.
Vamwe vatengi YEDU
CHINOTYISA mabasa TEAM'VE YEDU vakabatsira nemakasitoma EDU!
ZVINOTAURWA vatengi vanoti?
"Michelle, ndine kudya itsva maererano Golden Laser. Zvino imi vane chikwata nani zvikuru. Joe uye Johnson vari nyanzvi chaizvo uye nomazvo. Ivo kunzwisisa chikumbiro uye mhinduro munguva assertively. Makorokoto! Chokwadi muri wo nemazvo chaizvo uye kunzwisisa zvinhu zvenyu uye kutengesa zvikuru. "
"Rita, sezvo nguva dzose wako vatengi ndiyo yakanaka. Imi vakomana vave huru uye kana takamboita vanofanira kudhonza chikungiso uchava foni yedu vokutanga."
"Your Galvo Laser muchina ane chiutsi yakanaka kwazvo; kucheka kana kunyora (mark) kwazvo yokutsanya, magadzirirwe muchina wakanaka muchina anoratidza waivako wakanaka; nyore kuti ishande. Nyore kugadzirisa"
"Muchina zvakanaka chaizvo. Mr. Robin ndiyo yakanaka. Tinonakidzwa kushanda naye. Anobatsira Very uye akadzikama. Ndinoshuva nokukurumidza kurayira muchina mutsva uye kufadza inotevera nguva regai kushandura mukoti. Hope kuona kubatana mune ramangwana."